भाडामा गर्लफ्रेन्ड, के–के गर्न पाइन्छ ? - News site from Nepal
भाडामा गर्लफ्रेन्ड, के–के गर्न पाइन्छ ?
२०७५ मंसिर – आजकलका किशोर तथा युवकहरुमा गर्लफ्रेण्ड बनाउने होडबाजी हुन्छ । पार्कमा बस्दा होस् वा सडकमा घुम्दा, जब उनीहरु युगल जोडी देख्छन् तब आफ्नो पनि गर्लफ्रेण्ड भएको भए हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्दछन् । तर गर्लफ्रेण्ड भएका तन्नेरीहरुको पनि आफ्नै पीडा हुन्छ । प्रेमिकाको नखरा तथा माग पूरा गर्न नसकेर हैरान भएका दुखेसो सुन्न पाइन्छ उनीहरुबाट । सायद युवकहरुको यहीँ अवस्थालार्ई मध्यनजर गर्दै अहिले भाडामै गर्लफ्रेण्ड उपलब्ध गराउने सेवा सुरु भएको छ ।
हो, छिमेकी मुलुक चीनमा झण्डै २० रुपैयाँ खर्चमा एक सुन्दर गर्लफ्रेण्ड भाडामा पाइन्छ ।
चीनको गुआंगडोंगस्थित एक स्टोरमा यस्तो सुविधा छ । त्यहाँ सुन्दर तथा जवान युवतीहरुको लाइन हुन्छ । त्यहाँ कुनै पनि पुरुष गएर आफूलाई मन पर्ने युवतीलाई भाडामा गर्लफ्रेण्ड बनाएर लग्न सक्दछ । त्यसका लागि प्रति २० मिनेटको झण्डै २० रुपैयाँ रकम तिर्नुपर्दछ ।
यसरी भाडामा लिएका गर्लफ्रेण्डबाट के–के सुविधा पाइन्छ त ? धेरै आशा नगरे हुने रहेछ । ती भाडाका गर्लफ्रेण्डलाई आफूसँगै लिएर नजिकैका मल तथा स्टोरहरुमा घुमाउन सकिन्छ । सपिङ गराउने इच्छा छ भने पनि गराउन पाइन्छ ।
भाडाकी गर्लफ्रेण्डसँग लञ्च डेटिंग पनि गर्न सक्नुहुन्छ । तर यी सबै काम केवल २० मिनेटमा सकाउनु पर्दछ । यदि त्यसभन्दा बढी समय लागेमा अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।
भाडाकी गर्लफ्रेण्डको अनुमतिविना छुन पनि पाइँदैन । अनुमति पाएमा छुन भने पाइन्छ । तर, त्यभन्दा बाहेक सोच्नसम्म मनाही हुन्छ ।
रोचक त के भने त्यहाँ गर्लफ्रेण्ड मात्र होइन, ब्वायफ्रेण्ड पनि भाडामा पाउन सकिन्छ ।
नयाँ विश्वव्यवस्थाको बहसः कोरोना माथिको राजनीतिकरण